Waa tee kooxda Neymar u soo bandhigtay heshiis 190 Milyan oo Euro ah iyo mushaar Toddobaadle ah oo dhan 770,000? – Gool FM
Waa tee kooxda Neymar u soo bandhigtay heshiis 190 Milyan oo Euro ah iyo mushaar Toddobaadle ah oo dhan 770,000?
Haaruun September 9, 2016
(Barcelona), 09 Sebt 2016 –Wakiilka Weeraryahanka kooxda Barcelona iyo xulka Brazil, Neymar ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Paris Saint-Germain ee Waddanka Faransiisku ay xidiggan u soo bandhigtay heshiis 190 Milyan oo Euro ah iyo mushaar Isbuucle ah oo gaaraya 770 Milyan oo Euro.
Wagner Ribeiro, Wakiilka Neymar oo la hadlayay ESPN Brasil ayaa waxa uu xusay in Neymar uu ku sigtay in xagaagani uu ka tago kooxda Barcelona, iyadoo kooxo waaweyn sida PSG iyo Manchester United ay soo codsadeen, ka hor intii uusan heshiiska u dheereyn kooxdiisa Barcelona.
“Mar buu ku sigtay in uu ku biiro kooxda PSG, oo uu ka heli lahaa sanadkii 40 Milyan oo Euro oo saafi ah” ayuu sheegay wakiilku.
“Neymar sidoo kale wuxuu ku dhowaa Manchester United, balsde waxa uu kordhiyay qandaraaskiisii Barcelona, weliba lacag yar waayo Camp Nou waa halka uu doonayo inuu ka ciyaaro” ayuu sii raaciyay Wagner.
Kooxda haysata Horyaalnimada Faransiiska ee PSG ayaa waxaa ka tagay Zlatan Ibrahimovic xagaagani kaasoo ku biiray Manchester United, waxaana ay Naymar ka doonaysay in uu booskaasi u buuxiyo, balse waxa uu heshiis ku eg illaa 2021 u dheereeyay Barcelona, iyadoo qandaraaskiisana lagu burburin karo 200 Milyan oo Euro, halka 2019-kana qandaraaskiisa lagu jebin karo 250 Milyan oo Euro.
Qatar oo markii labaad lagu qabanayo ciyaarta kama dambeysta Super Cup-ka Talyaaniga
Mudada uu garoomada maqnaan doono goolhayaha kooxda Barcelona ee Marc-Andre ter Stegen oo la shaaciyey